Ireo mpilalao mozika 5 tsara indrindra ho an'ny Ubuntu | Ubunlog
Mpilalao mozika 5 ambony ho an'ny Ubuntu
Paul Aparicio | | Multimedia, Ubuntu
Isaky ny manova ny solosainako na ny rafitra fiasako aho, zavatra izay ataoko matetika matetika (farafaharatsiny farany), dia manana olana mitovy amin'izany aho: tsy atolotry ny mpamokatra mozika amiko izay ilaiko rehetra. Ny sasany sarotra loatra, ny sasany tsotra loatra, ary ny sasany tsy manana safidy tena ilaina ho ahy. Eny, raha tsy maintsy milaza ny marina aho, ity dia zavatra tsy nitranga tamiko hatry ny ela satria efa hitako ny mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny rafitra miasa rehetra.
Mba hiresahana ny filàna rehetra, amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka safidy 5 izahay afaka mametraka amin'ny rafitra fiasa mifototra amin'ny Ubuntu izahay. Ny sasany amin'izy ireo dia ao amin'ny tahiry ofisialy, ny sasany kosa tsy ao. Na izany na tsy izany dia azonao atao ny manampy foana ny tahiry ofisialy ho an'ny tetik'asa tsirairay na misintona fonosana .deb an'ny rindrambaiko. Miaraka amin'ireo tolo-kevitra 5 tokony ho fantatry ny mpampiasa Ubuntu rehetra izahay.
1 Ny mpilalao tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
1.6 Bonus: mendri-piderana
Ny mpilalao tsara indrindra ho an'ny Ubuntu
Izany no Mpilalao default Ubuntu ary izany no nametrahako azy teo amin'ny toerana voalohany. Io ary koa fa efa nampiasako azy efa ela ary manompo ahy tsara ho amin'izay tadiaviko io: mpilalao tsy misy fahasarotana loatra izay ahafahako manana ny tranomboky moziko voalamina tsara.
Mila miaiky aho fa nahita ny safidy maro horesahiko ato amin'ity lahatsoratra ity satria tsy manana zavatra tena ilaina amiko ny Rhythmbox: Equaliser izay ahafahako manova ny audio mba hiasa tsara amin'ny headphones rehetra . Fa indray andro, reraky ny fametrahana safidy hafa tsy tompon-tany izay tsy 100% izay tadiaviko ihany koa, dia nitady fanazavana momba ny fomba manampia equalizer ary ny bingo! Azo atao izany tsy misy olana amin'ny alàlan'ny fanokafana terminal ary fanoratana ity baiko manaraka ity:
sudo add-apt-repository ppa:fossfreedom/rhythmbox-plugins -y && sudo apt-get update && sudo apt-get install rhythmbox-plugin-equalizer -y
Raha vantany vao tafapetraka isika dia tsy mila manidy, misokatra Rhythmbox fotsiny ary miditra amin'ilay ekipana avy amin'ny Tools / Equalizer. Tsy mila intsony aho, fa ireto misy safidy hafa.
Clementine Izy io dia tsimbadika novaina an'ny mpilalao hafa izay ampianay amin'ity lahatsoratra ity (Amarok), saingy ny fanovana dia mahatonga ity mpilalao ity ho tsotra kokoa sy hahay kokoa noho ny kinova voalohany. Ho fanampin'izay, manana safidy maro ianao, toy ny fahaizana mijery ny mombamomba ny mpanakanto, fampahalalana momba ny hira, tononkira, rakotra rakipeo, sns. Raha tsy tianao ny Rhythmbox, na manampy ny ekarista aza, heveriko fa ny zavatra voalohany tokony hozahanao dia i Clementine.
Mba hametrahana azy dia ampiasao fotsiny ny baiko sudo apt apetraka clementine
Raha ny teniny dia ity no "Definitive Music Player." A Kinova Linux an'ny fampiharana Foobar2000 ary mpilalao manala ny maro amin'ireo fanelingelenana mety ho hitantsika amin'ny rindrambaiko hafa amin'ity karazana ity. Ny tsiambaratelo na ny antony maha-DeaDBeeF azy dia ny fahatsorana; mitendry mozika ary amin'ny zavatra hafa kely.
Etsy ankilany, ny DeaDBeeF dia misy fiasa toy ny fanampiana amin'ny famoronana lisitra fanamboarana, fanohanana plugin, fanovana metadata, sy maro hafa. Mitady zavatra tsotra? Fitsapana DeaDBeeF.
Raha hametraka azy dia tsy maintsy alehantsika tranokalan'izy ireo ary sintomy ny kaody mpilalao. Raha mampiasa kinova mifototra amin'ny Ubuntu ianao dia ampidino fotsiny ilay fonosana .deb 32/64-bit, tantano izy, ary apetraho amin'ny mpampiditra rindrambaiko anao.
Na dia tsy safidiko lavitra azy aza izany, ao anaty lisitry ny rindranasa ho an'ny Ubuntu dia tsy azoko diso izany hiasa amin'ny terminal izy io. Rehefa miresaka momba ny mpilalao mozika isika, ilay azontsika ampiasaina amin'ny terminal Ubuntu dia antsoina hoe CMUS, a «mpilalao mozika konsoly kely, haingana sy mahery ho an'ny rafi-pandidiana Unix".
CMUS mahazaka ankamaroan'ny rakitra audio ary azo alamina mba hiasa miaraka amin'ireo rafitra famoahana feo toa an'i PulseAudio, Alsa, ary Jack.
Su interface tsara intuitive, raha mbola misy baiko fantatra fa afaka maka hevitra amin'ny baiko "man cmus" isika, tsy misy teny nalaina, avy tao amin'ny terminal. Avelako eto izy, izaho dia iray amin'ireo tia ny totozy sy ny tondro.
Mba hametrahana CMUS, sokafy fotsiny ny terminal ary kitiho ny baiko sudo apt apetraka cmus
Amarok no mpilalao default ho an'ny fizarana sasany mampiasa tontolo misy sary mifototra amin'ny KDE. Taorian'ny taona maro nampiasaina MediaMonkey, mpilalao izay nampiasaiko taorian'ny Windows Media Player (nantsoina toy izany ve?), rehefa nifindra tamin'ny Linux aho dia toa tsy dia hitako loatra ny zava-drehetra. Ny mpampianatra ahy Linux, izay nanampy ahy hanomboka amin'ny Ubuntu (hello Joaquin Joa), dia nilaza tamiko momba ny Amarok. Tamin'ny voalohany dia raiki-pitia aho satria izay napetrako ho default ao amin'ny Ubuntu (tsy tadidiko izay) dia tsy dia nahalala ahy firy ary i Amarok dia manana safidy betsaka toa an'i Clementine na mihoatra aza. Safidy maro tokoa angamba no lasa nandreraka ahy, saingy ity mpilalao ity dia tonga lafatra ho an'ireo izay tsy te hahafoy zavatra.
Baiko fametrahana: sudo apt apetraka amarok
Ary raha efa nahafantatra anao kely ny DeaDBeeF, Rhythmbox, Clementine ary Amarok ary tsy anao ny terminal, angamba ilay tadiavinao dia antsoina hoe Audacious, a mpilalao maivana, mahery ary tsy misy safidy maro mety tonga lafatra raha izay tadiavintsika, ohatra, dia ny filalaovana fampirimana feno rakitra MP3.
Mba hametrahana azy dia mila manokatra terminal fotsiny isika ary manoratra ny baiko sudo apt apetraho amin-tahotra
Inona no mpilalao mozika tianao indrindra amin'ny Ubuntu?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Mpilalao mozika 5 ambony ho an'ny Ubuntu
18 hevitra, avelao ny anao
Saola castro dia hoy izy:
Valio amin'i Saul Castro
Krack Garcia dia hoy izy:
Valiny tamin'i Krack García
Proteus Force Ten dia hoy izy:
Valio ny Proteus Force Ten
Javier Pazos placeholder sary dia hoy izy:
Valiny tamin'i Javier Pazos
Аниил Леонель dia hoy izy:
Valio ny Даниил Леонель
v2x dia hoy izy:
Guayadeque dia mahery sy mandaitra .. zahao ny guayadeque.org (novolavolain'ny Espaniôla iray, Canary manokana) izay navoaka vao 0.4.3.
Hijery ny DeaDBeeF aho (foobar2000 milaza izany rehetra izany), misaotra
Valio ny v2x
Jack daniel dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jack Daniel
Henry de Diego dia hoy izy:
Nampiasako tamin'ny lisitra Rythmbox (ary tsy hantsoiko hoe Banshee ... Natao hamafana azy io satria napetraka tao amin'ireo kinova nanana izany i Ubuntu), Clementine, Amarok, CMUS ary Audacius.
Tena eo anelanelan'ireny ary matoky fa ny hafa izay tsy mbola nampiasako (DeadBeef) avy ao anatin'io lisitra io dia mampihomehy tokoa raha dinihina. Na dia mametraka Audacity (tena tsara nefa sarotra nefa tsy dia tsara tarehy) aza isika ao amin'ny vondrona, dia afaka mahafeno fepetra isan-karazany hanasongadinana izay mampiavaka azy isika:
Rythmbox: Tsotra sy tsiranoka tsotra izay namboarina, mihamaro hatrany amin'ny interface Ubuntu (Gnome sy Unity).
Clementine: Mitovy amin'ny Rythmbox. Manome fampahalalana bebe kokoa momba ny mozika ary manana fitaovana fampiasa manohitra izany.
Amarok: Ny amboadia dia milalao (saika raha tsy ny zava-drehetra) izay tsara ary azoko atao ny milaza fa tsy misy isalasalana fa ny mpilalao FLAC tsara indrindra amin'ireny. Feo tena madio sy voarindra. Ny zavatra sarotra dia ny fanaingoana azy sy ny fampiasana azy, na dia biby feno aza izy io.
CMUS: mpilalao matanjaka be ary maivana (tsotra) rehetra. Somary manahirana ihany izy io satria tsy dia mifampiresaka, fa tsy diso fanantenana mihitsy amin'ny kinova mivantana sy / na S.O taloha / lany andro ho an'ny terminal tsy miasa.
Fahamarinana: Io no be mpiresaka indrindra amin'ny mpampiasa Amarok amin'ny fahaiza-manao. Mpanoratra sy tonian-dahatsoratra feno tanteraka. Ny zavatra ratsy indrindra dia ny fahasarotan'ireo safidiny tsy manam-petra sy ny endriny sary tsy mahasarika.
Audacius: mpilalao minimalista miorina amin'ny Winamp. Izy io dia manana equalizer sy playlist, azo ovaina miaraka amin'ny addons sy ny hoditra azo ovaina ao amin'ny galeria (Gnome Arts / Looks ankoatry ny hafa).
Mazava ho azy, ny fitondran-tenan'ny tsirairay amin'ny fanajana ny iray hafa dia tena azo iadiana hevitra, saingy tsy misy isalasalana fa tsy misy tsara noho ny iray hafa noho izay atolotray ary tadiavin'ny mpampiasa indrindra.
Hataoko ao anaty fonosana mpilalao iray tena mahavariana ao amin'ny Windows (AIMP 2), saingy tokony holazaina fa ny fiasan'izy io dia tsy dia voahaja loatra satria eo am-baravarankely io ary tsy mahavita araka ny andrasana.
Valiny tamin'i Enrique de Diego
Gaston zepeda dia hoy izy:
VLC ny tsara indrindra
Valiny tamin'i Gaston Zepeda
Mauricio Torres Dj Mao Mix dia hoy izy:
Clementine sy Amarok no tsara indrindra ary mazava ho azy fa tsara foana ny VLC. Misy iray izay tsara ihany koa ary antsoina hoe Tuna, ity no tranonkala http://www.atunes.org/
Mamaly an'i Mauricio Torres Dj Mao Mix
Miquel Butet Lluch dia hoy izy:
Mampiasa Clementine bebe kokoa noho ny rehetra aho, ary indraindray koa Kodi
Valiny tamin'i Miquel Butet Lluch
leillo1975 dia hoy izy:
Herintaona lasa izay dia nihaona tamin'ny mpilalao Sayonara aho ary hatramin'ny nametrahako azy tao dia nijanona izy io, manana ny zavatra rehetra tokony hananany izy, haingana ary misy lisitra mavitrika. Tokony andramanao izany:
Talohan'izay dia nisy iray hafa lehibe noresahina, izany hoe Guayadeque, na dia nanomboka nihaona tamin'i Sayonara aza aho dia tsy nampiasa izany.
Mamaly an'i leillo1975
Paul Aparicio dia hoy izy:
Salama, leillo1975. Sayonara tiako: tsotra, intuitive ary tsy misy fahasarotana be loatra. Ary manana endrika tsara ihany koa izy io. Hampiasaiko mandritra ny fotoana fohy aho hijery izay mitranga.
Valiny tamin'i Pablo Aparicio
Abraham Rodriguez dia hoy izy:
Misaotra leillo1975 tamin'ny tolo-kevitra narosoko, nakariko ny mpilalao Sayonara, tena interface tsara sy tena tsara. Mbola mila fiasa vitsivitsy ihany io, saingy mandeha tsara io. Na dia tsy nandeha ho ahy aza ny fikarohana rakitra tao anatin'ny lahatahiry. Raha nanana crossfade teo anelanelan'ny lalana sy ny fikarohana aho dia io no mpilalao lavorary ho ahy. Nampiasa an'i Clementine aho nandritra ny taona maro, fa ny interface tsy niova mihitsy, lasa lany andro io, fa raha ny fampiasa, tsy mbola nahita mpilalao mahay aho, tsy lavitra an'io i Sayorana. Miarahaba anao!
Valiny tamin'i Abraham Rodriguez
Miguel dia hoy izy:
Izy rehetra dia samy manana ny fizahana mpikaroka rakitra 90 an
Mamaly an'i miguel
Leakimus dia hoy izy:
Ka iza amin'ireo no atolotray amin'ny famolavolana manintona tena tsara fa tsy endrika 90?
Valiny tamin'i Leakimus
Alejo dia hoy izy:
Mampiasa ny mpilalao Nightingale aho, sehatra afovoany, azo ampifanarahana ary azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny plugins. Mamela anao hitantana sy handamina mora foana ny fitehirizam-bokinao manontolo.
Valiny tamin'i Alejo
Jose Vicente Sanchis Marques dia hoy izy:
Mangataka ny fanampianao aho. Nanandrana an'i Clementine aho satria tsy niasa tsara intsony i Rythmbox. Manokana, ny rohy ao amin'ny sisin'ny "mozika" rehefa manindry azy dia TSY manolotra fanafarana fampirimana na fisie.
Total izay tsy manafatra ny fisie «mozika» tranomboky
Nametraka sy namono azy aho, nanadio azy imbetsaka aza mba hitsapana, nefa tsy nisy.
Ka raha manampy ahy ianareo lehilahy angamba hifikitra amin'ny Rythmbox.
Misaotra betsaka mialoha. Azonao atao ny mandefa valiny amin'ny mailako
Valiny tamin'i Jose Vicente Sanchís Marqués
Manomboka mampihena ny vidin'ny solosainy amin'ny Dell i Dell
Ahoana ny fomba hametrahana Ubuntu ho azy ireo fametrahana patch patch
Raiso ny lahatsoratra farany amin'ny Ubuntu, Linux ary rindrambaiko maimaimpoana.